WARARKA QOWMIYADAHA KU HOOS NOOL GUMEYSIGA ITOOBIYA
DHAGEYSO: R A D I O X O R I Y O
Dagaallo ciidamada gumaysiga lagu wiiqay iyo dad la laayay.
Sargaal sare oo Itoobiya ka baxsaday.
Weriyayaal Itoobiyaan ah oo baxsaday.
Askar badan oo Itoobiyaan ah oo firxatay.
Barnaamujkii todobaadka iyo geeska Afrika.
Barnaamuj gaar ah oo aanu ugu magac daray Saxrdiid wuu yimid iyo suugaan halgameed.
Ciidanka Waddaniga Xoreynta Ogadenya ayaa 01-06-04 dagaal mir ah ku qaaday ciidanka caga-jiidka ah ee ku sugan magaalada Dallaad, halkaasoo cadowga lagaga dilay 3 askari, 2 kalana lagaga dhaawacay.
31/05/04 waxaa ciidanka cadowga Itoobiya ee ku sugan tuulada Kabti-naag laga dilay 1 askari,waxaana laga dhaawacay 2 askari oo kale. Waxaa meeshaas lagaga furtay ciidanka cadowga 5 qori oo nooca AK-ga loo yaqaano ah.
Kabtan dhamme ah iyo 6 askari oo kale ayaa ka goostay ciidanka cadawga ee ku sugan magaalada Qabridaharre 27 bishii aan soo dhaafnay ee sanadkan
Dhinaca kale:Tuulada Las-Dharkaynle, ayaa 01-06-04 wuxuu ciidanka gumeysigu ku dilay nin shacab ah, mid kalena wuu ku dhaawacay.
25/05/04 Ciidanka gumaysiga Itoobiya ayaa 30 Neef oo Adhi ah kaga qashay Qari-Jiiqood nin safar ahaa oo shacabka deegaankaas ka mid ahaa. Ninkan ayaa xabsiga loo taxaabay, kadib markuu dacwo Adhiga laga qashay ku saabsan u gudbiyay saraakiishii utalinayay ciidamada boobka ku sameeyay.
Wararaka naga soo gaadhaya magaalada Washington ayaa sheegaya in sargaal sare oo Itoobiyaan ah uu iska dhiibay wadanka Maraykanka, isagoo sargaalkaasi magangalyo siyaasadeed ka codsaday dawlada Markanka.
Sargaalkan, oo lagu magacaabo koranyl Simret,ayaa aahaa gacanta midig ee Meles Zenawi, wuxuuna ka mid ahaa sargaalkaasi khubaradii soo aas-aastay ururka TPLF. Kornayl Simret wuxuu dalka Maraykanka u joogay arrimo la xidhiidha xaga caafimaadka.
Dadka arimaha Itoobiya u dhuun-duleela ayaa sheegaya inay aad ula yaaban yihiin baxsashada kornaylkan, isagoo lagu tirinayay inuu ka mid ahaa dhawrka nin ee talada wadanka Itoobiya gacnata ku haya.
Wariyeyaal Itoobiyaan ah oo baxsaday.
Wariyaha Wakaaladda Wararka Ogadenya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa usoo tabiyey RX inay baxsadeen laba wariye oo Itoobiyaan ah, kuwaasoo lagu kala magacaabo Indhawalam Gamadha iyo Tasfaye Dhisasaa.
Warar xog-ogaal ah oo aan ka soo xiganay wargayska Minilik ee afka axmaariga ku soo baxa, ayaa sheegaya in labadan wariye ay iska dhiinbeen wadan ka mid ah wadamada reer galbeedka ,waxayna ku doodeen labadaas wariye in xaalada ay maanta Itoobiya marayso ay tahay mid aan loo dulqaadan karin.
Labadan wariye waxay tilmaameen in xaaladan oo kale ayna Itoobiya horay u soo marin, uuna masuul ka yahay taliska Addisa Ababa, waxayna labadaas wariye caalamka ka codsadeen in Itoobiya loo gurmado, isla markaana masuuliyiinta taliska Addis Ababa la horkeeno maxkamad caalami ah.
Askar badan oo Itoobiyaa ka soo firxatay.
Wasaarada warfaafinta ee Eritreya ayaa shaaca ka qaaday in bishan Juun 4-dii ay 13 askari ka soo baxsadeen xukuumada Addis Ababa. Askartan ayaa sheegay inay ciidamadamo aad u tira badani ay Eritereya kusoo fool-leeyihiin, kuwaasoo ayey yidhaahdeen ka soo goosanaya xukuumadda Itoobiya.
Askartan Itoobiyaanka ah ee ka soo firxanaya taliska Addis Ababa miciina soo bidaya dawlada Erietereya, ayaa kor ugu soo kacday si la dareemi karo baryihiin ugu dambeeyay, taasoo keentay in bilihii ugu danbeeyay ay wadanka Eritreya isu soo dhiibaan askar ka badan 110 askari oo ay ku jiraan 4 sargaal oo sare .
Sadex iyo tobankan askari ee ugu danbeeyay waxay kala yihiin:
1. Haile Tebabal Ijigu, oo u dhashay qoomiyada Axmaarada
2. Debela Akti Wenta , oo u dhasahy qoomiyada Oromoda
3. Mengistu Assefa Gebreselassie, oo u dhashay qoomiyada Tigreega,
4. Mendefro Valcha Chiquala oo u dhashay qoomiyada Oromoda
5. Getu Mebrahtu Tegen, oo u dhashay qoomiyada Tigreega
6. Hagos Berhe Kahsai, oo u dhashay qoomiyada Tigreega
7. Haile Workneh Wondim, oo u dhashay qoomiyada Tigreega
8. Makonnen Teklu Gebregziabeher, oo u dhashay qoomiyada Tigreega
9. Samuel Kebede Gedame oo u dhashay qoomiyadaha dadka koonfureed
10. Adamu Chefe Debelo oo u dhashay qoomiyada Oromoda
11. Tesfaye Melaku Abraha, oo u dhashay qoomiyada Tigreega
12. Gebrehiwet Zerai Gebregziabeher, oo u dhashay qoomiyada Tigreega
13. Solomon Woldegergis Gebretekle, oo u dhashay qoomiyada Tigreega.
Askartan baxsanaysa ayaa waxay u badan yihiin qowmiyada Tigreega ee uu ka dhashay kaligii taliye Meles Zenawi, waxayna arrintaasi cadaynaysaa in talsika Melse Zenawi aanuu haba yaraatee haysanin cid ku qanacsan ama taageeraysa taliskiisa.
Qawmiyada Tigreega ayaa si cad diiday inay u dabbaal-degaan sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegtay asaastkii ururka TPLF ee talada Itoobiya gacanta ku haya, arrintaasoo keentay in xukuumadda Addis Ababa ay si toos ah maamulka Tigreega ugu qasabto inuu dabbaal-degaas ka hirgeliyo gobollada Tigreega.
Afee: Aragtida warkan waa mid u gaar ah Radio Xorriyo.